Gal-Mudug oo Madaafiic ku soo weerartay Puntland iyo dowladda ka hortagtay – Radio Daljir
Diseembar 3, 2015 6:32 b 0
Somalia, December 03, 2015-(Daljir)_Â Iyadoo maalinkii shalay magalada Gaalkacyo heshiis ku gaareen Puntland iyo Gal-Mudug ayaa maanta waxaa mar kale magalada laga maqlayaa hubka culus oo ka imaanaya dhanka Gal-mudug kuwaasoo waxyeelo gaarsiiyay Hotel iyo guryo ku yaala xero daraawiish.
Guddigii loo saaray inay kala qaadaan ciidanka is hor fadhiya isla markasna saaka arrintaasi u howlgalaan ayaa caqabad kala kulmay dagaalka iyo xiisada mar kale kasoo cusboonaatay magalada Gaalkacyo.
Wararka ayaa sheegaya in dagaal uu hada ka socda magalada balse rasaas xoogan iyo hubka culus oo dhanka Gal-Mudug lagas oo ridayo waxyeelo keentay.
Wariye aan la xariirnay hadda ayaa noo sheegay dadka ku sugan magalada inay cabsi ka muujiyeen hubka culus ee dhacaya, ayna sababi karto in mar kale dadka magalada joogaa ka barakacaan.
Magalada Gaalkacyo weli waxaa ku sugan RW.Somaliya, madaxda mamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo wakiilo beesha caalamka ka socda, dagaalkan maanta dib u bilowdeyna wuxuu imaanayaa xilli heshiiskii shalay la gaaray uusan weli dhaqan galin.